Cali Gacal “waxaan ka digayaa faragelinta Galmudug ay ku hayaan Puntland iyo Xisbiyada qaar” – Kalfadhi
Cali Gacal “waxaan ka digayaa faragelinta Galmudug ay ku hayaan Puntland iyo Xisbiyada qaar”
Cali Gacal Casir Guddoomiyaha Golaha Wakiilada ee Maamulka Galmudug ayaa maamulka Puntland ku eedeeyay in uu faragelin ku haayo doorashoyin ka dhaca degaanada Galmudug ee bartamaha Soomaaliya.
Sidoo kale Cali Gacal Casir ayaa sheegay in qaar kamid ah Xisbiyada siyaasadeed ee dalka ay faragelin ku haayaan arimaha gudaha ee maamulka Galmudug. “Madaxweynaha Puntland waxa uu faragelin ku haayaa arimaha doorashooyinka ee Galmudug” ayuu yiri Cali Gacal Casir.
“Waxaan ognahay in Gaalkacyo iyo Garowe looga tashaday doorashooyinka Galmudug islamarkaana talooyin aan sax aheyn la siiyay Madaxweyne Xaaf” ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir.
Cali Gacal Casir ayaa sheegay in Maamulka Galmudug uu wajahayo dhibaatooyin dhinac walba ah balse ay ugu wayntahay xasilooni darrada siyaasadeed iyo wadashaqayn la’aanta hogaanka maamulka. Dhamaan dhinacyada siyaasadeed ee Soomaaliya ayuu ka dalbaday in ay joojiyaan faragelinta Galmudug iyo arimaheeda.
“Waxaan la soconaa in Xisbiyo siyaasadeed oo dalka ka diiwaan gashan ay faragelin ku haayaan arimaha gudaha ee Galmudug waxaan ugu digeynaa in ay hagar-daamiyeen Galmudug, fadlan faraha kala baxa” ayuu yiri Cali Gacal Casir oo warbaahinta shir jaraa’id ugu qabtay magaalada Cadaado ee gobalka Galgaduud.
Dhinaca kale Cali Gacal Casir ayaa soo dhoweeyay habraaca doorashooyinka oo ay xalay soo saartay Wasaaradda Arimaha Gudaha ee Xukuumadda Soomaaliya. Guddoomiyaha ayaa sheegay in Xildhibaanada Galmudug kulan ay ku yeesheen Cadaado ay ku soo dhaweeyeen habraaca doorashada.
“Xildhibaanada Galmudug waxay soo dhoweynayaan habraaca doorashada ee Wasaaradda Arimaha Gudaha Soomaaliya” ayuu yiri Cali Gacal. “Kulan ay yeesheen Xildhibaanada Galmudug waxay uga hadleen xaaladda Galmudug iyo habraaca doorashada waxayna ku taliyeen in wadadaas ay tahay mid saxan oo ah in la maro” ayuu hadlkiisa sii raaciyay Cali Gacal Casir.
Cali Gacal Casir ma cadeynin xisbiyada faragelinta ku haaya Galmudug arimaheeda gudaha hayeeshee hadalkiisa ayaa ku aadayo iyadoo shalay ay walaac ka muujiyeen xaaladda Galmudug Xisbiga UPD ee uu hogaamiyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Ma jirto ilo ka madaxbanaan Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir oo xaqiijinaya eedeymaha uu usoo jeediyay maamulka Puntland
Saddex Senator oo kismaayo uga dhawaaqay in ay difaacayaan madaxbanaanida doorashada Jubbaland